एक पटक प्रयोग गरिसकेपछि तेल पुनः तताएर प्रयोग गर्नुहुँदैन, किन ?
डा ओममूर्ति अनिल बिहीबार, मंसिर १८, २०७७, ०९:५१
तेललाई पटक–पटक तताउदा अल्डिहाइड नाम गरेको टक्सिन उत्पन्न हुन्छ। यस्तो तेलको सेवन गरेपछि यसमा भएका टक्सिनहरुले शरीरभित्रको प्रोटिन, इन्जाइम र हर्मोनसित प्रतिकृया गरेर स्वास्थ्यलाई धेरै हानी पुर्‍याउन सक्छ। सूर्यमुखीको तेल र भटमासको तेललाई पटक–पटक तताउँदा राम्रो अनस्याचुरेटेड फ्याट नराम्रो ट्रान्स फ्याटमा परिणत हुनसक्छ।
कार्यालयमा कोरोना संक्रमणबाट कसरी बँच्ने?
ग्यास्ट्रिकमा ध्यानुपर्ने ६ कुरा लगातार पानी पिउँदा पेटमा ग्यास जम्मा हुन पाउँदैन र जिउमा समेत पानीको सन्तुलन कायम राख्छ। तर पानीको सट्टा कोक, फेन्टाजस्ता कोल्ड ड्रि... शनिबार, पुस ११, २०७७